Isevisi Yokuvikela Ngokushesha - I-Anebon Metal Products Co., Ltd.
I-Anebon ayigcini ngokuhlinzeka ngezinsizakalo ezenziwe ngezifiso zokukhiqizwa kwevolumu ephansi yemikhiqizo, Uma ucabangela ukwakhiwa okusha kwezimboni, kepha futhi inikezela ngezinsizakalo ezisebenza ngokushesha. Uma unamaphrojekthi amasha asathuthukiswa, singakunikeza izinkomba zokukhetha izinto ezibonakalayo, izinqubo zemishini kanye nokwelashwa kwendawo. Nezinye iziphakamiso, Yenza ukwakheka kwakho kube lusizo ngokwengeziwe, uqaphele ubuhlakani bakho ngokonga nangokushesha.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi Ukukhiqizwa Kwe-Rapid kuhlukile ekubonisweni kwe-prototyping, ngoba kudinga ukunakekelwa okuphezulu kwekhwalithi, ukuphindeka, kanye nezidingo ezinzima kakhulu zezicelo zokukhiqiza. Kulokhu u-Anebon ungomunye wabambalwa embonini ongumkhiqizi weqiniso osheshayo.
Sisebenza ngokukhethekile ekukhiqizeni ikhwalithi ephezulu, ama-prototypes aphansi. Ngobubanzi bezobuchwepheshe nezinsizakalo, siyisitolo esifanelekile sokumisa zonke izidingo zakho zokuboniswa.
Ama-prototypes alusizo kakhulu ekuthuthukisweni komklamo, futhi amakhasimende ethu amaningi adinga ukukhiqiza ngokushesha izingxenye zomzimba ukuze aqinisekise ukwakheka noma athole amathuba okuthengisa wesikhashana.
Njengoba izingxenye eziningi ezikhiqizwa ezitolo zesibonelo kulezi zinsuku zidinga imishini emaceleni amahlanu, izinsizakalo zokugaya i-5-axis kanye nemishini zifunwa kakhulu kwezicelo ezahlukahlukene ezimbonini ezahlukahlukene kubandakanya imboni ye-aerospace, imboni ye-steamer, imoto evala izimboni kanye namandla izimboni zokukhiqiza. Izinzuzo zemishini zibandakanya ukuphela kwekhwalithi ephezulu, ukubeka ngokunemba, nesikhathi esifushane sokuhola ngenkathi kwakhiwa onqenqemeni olukhulu lwamathuba amabhizinisi amasha.
Kungani ukhetha i-Anebon ye-prototyping esheshayo?
Ukulethwa Okusheshayo: Isibonelo esisheshayo sezinsuku eziyi-1-7 ukulethwa komhlaba wonke, ukucubungula ukukhiqizwa kwevolumu ephansi izinsuku ezi-3-15 ukulethwa komhlaba jikelele;
Iziphakamiso ezinengqondo: Phakamisa iziphakamiso ezinengqondo nezingabizi kuwe ngezinto zokwakha, amasu okucubungula, kanye nokwelashwa kwendawo;
Umhlangano Wamahhala: Iphrojekthi ngayinye iyahlolwa futhi ihlangane ngaphambi kokulethwa ukuvumela amakhasimende ukuthi ahlangane kalula futhi agweme ukuchitha isikhathi okubangelwa ukusebenza kabusha.
Inqubo Yokuvuselela: Sinabasebenzi bokuthengisa aba-1 kuya kwabangu-1 ukuze sibuyekeze inqubekela phambili futhi sixhumane nezindaba ezihlobene online.
Ngemuva-Sales Izikhungo: Amakhasimende athola impendulo evela kumkhiqizo futhi sizohlinzeka ngezixazululo kungakapheli amahora angu-8.